Sahanka cusub ee Nazi-ga ayaa beddelaya taariikhda Sirdoonka Sirta ee Ingiriiska iyo Hitler
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » dhaqanka » Sahanka cusub ee Nazi-ga ayaa beddelaya taariikhda Sirdoonka Sirta ee Ingiriiska iyo Hitler
Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Wararka UK
Cadaymo cusub ayaa soo ifbaxay kuwaas oo tilmaamaya markii ugu horeysay ka qayb qaadashada Ingiriiska ee "Operation Valkyrie" - shirqoolkii foosha xumaa ee 20 Luulyo 1944 lagu dilay Hitler. Ilaa hadda buugaagta taariikhda waxay u malaynayeen in hawlgalku uu ahaa mid si gaar ah u shaqeeyay iska caabin Jarmal ah.
Qoraaga sirta ah ee Nigel West ayaa daahfurka sameeyay xilli uu baarayay taariikh cusub oo ku saabsan “Abwehr”, oo ah wakaaladda sirdoonka ee Jarmalka ee xilliga dagaalka. Waxa udub dhexaad u ahaa shirqoolka awoowgii Amiir Frederick Solms-Baruth V, kaas oo dawladda Jarmalka kula dagaallamaya soo celinta hantida qoyskiisa. Waxay u dhaqantay inay saldhig u noqoto iska caabinta waxaana la wareegay ciqaab ahaan Naasiyiintu ka dib markii shirqoolku fashilmay.
Hadda helitaanka wakiil Ingiriis ah oo ay shaqaaleysiisay MI6 laba sano ka hor isku dayga oo lagu dhejiyay meel u dhow meesha ugu sarreysa ee iska caabinta, waxay muujineysaa in MI6 ay si buuxda uga warqabto, oo adag - haddii aan si firfircoon looga qayb qaadan - isku day dil.
Hantida MI6, Dr. Otto John, ayaa si fiican loogu meeleeyay inuu u shaqeeyo basaas ahaan. Qareen ahaan Lufthansa, wuxuu si joogta ah ugu safray dhexdhexaad Spain iyo Portugal amarkii Colonel Georg Hansen (kaas oo u kici doona in loo magacaabo madaxa Abwehr) si uu ula kulmo shirar ballaaran oo Ingiriiska ah oo ku saabsan joojinta Adolf Hitler, iyada oo aan shaki gelin. .
SIDEE LOO SAMEEYAY GARABKA
Xogtan waligeed lama xidhiidhin ilaa ay Galbeedku samaysay daahfurka. Shaqadiisii ​​hore waxay hore u ogaatay in wakiilada MI6 Winsor ay la xidhiidheen John, laakiin ilaa hadda cidina ma garwaaqsan muhiimada kulamadooda iyo doorka John u ciyaaray Colonel Hansen. Xaqiijin dheeraad ah ayaa ka timid MI5 Oxford-Academic and Ex-MI5 Analyst Herbert Hart (kadib bare sare oo cilmiga sharciga ka dhiga Jaamacadda Oxford), kaas oo milkiilaha ka qoray John's file MI5 ee dhawaan la shaaciyay in uu runtii u shaqaynayay Ingiriiska ilaa 1942-kii.
WAA MAXAY TAHAY
Tani waxay iftiimisay iftiin cusub oo ku saabsan shirqoolka caanka ah, kaas oo markii hore loo aaneeyay inuu yahay mid gaar ah oo ka mid ah shaqada Jarmalka. Basaas ahaan, doorka John wuxuu ahaa inuu u dhaqmo sidii dhexdhexaadiye u dhexeeya Georg Hansen, iyo MI6. Ilaa cilmi-baadhista West, in lagu daabaco buugiisa soo socda, xidhiidhkani ma cadda.
DIIWAANKA ADEEGA SIRDOONKA QARSIGA AH EE WELI SHAACIN MA AHA - XIRIIRKA MAQAN
MI6 waxay ku haysaa fayl xidhan Otto John, kaas oo aan kala saari doonin sababo la xidhiidha in Adeeggu aanu lahayn wax shuruud ah oo sharci ah si uu sidaas u sameeyo, oo uu waajib ku ah inuu ilaaliyo aqoonsiga dhammaan wakiilada, xitaa kuwa dhintay muddo dheer. Dr. John wuxuu dhintay March 1997.
Solms-Baruth wuxuu qaaday dagaalka aabihiis si loo soo celiyo hantida qoyska, oo hadda wali ku jirta Jamhuuriyadda Federaalka. Waxaa la wareegay Nazis kaalintii dhexe ee awoowgiis Prince Frederick III uu ka ciyaaray afgambigii Luulyo 20-keedii. Awowgiis waxa uu u shaqayn jiray sidii lataliye ahaan dastuurka cusub, dilka ka dib, ee ku salaysan qaabka Ingiriiska, waxana uu siiyay qalcaddiisa HQ ahaan diyaarinta dhulalka.
Waxay ahayd cilmi-baaris ballaaran oo kooxda Prince Frederick Solms-Baruth V ay sameeyeen taasoo keentay in Nigel West ay caddeeyaan in qalcaddii Baruth ay noqotay xarunta iska caabinta, oo ay ku nool yihiin dhagar qabayaasha Abwehr kuwaas oo siinayay walxaha qarxa ee Ingiriiska iyo waqti-fiyuusyada bamka kadibna la ogaado. isku xirka sirdoonka Ingiriiska ee Otto John.
“Tani waa mid aan horay loo arag. Ujeeddada cilmi-baaristan waxay ahayd in si cad loo xaqiijiyo guriga awoowgay inuu yahay Xarunta iska caabinta. Weligay kuma riyoon inay sidoo kale muujin doonto ku lug lahaanshaha Ingiriiska ee isku dayga ah in la dumiyo mid ka mid ah ragga ugu sharka badan taariikhda."
Amiir Frederick Solms Baruth V
December 9th wuxuu arkayaa dhageysi sharci oo dheeri ah oo ku saabsan 32-sano kiis soo celinta Solms-Baruth ee maxkamadaha Jarmalka oo ay ku jirto caddayntan cusub.
KU SAABSAN PRINCE FREDERICK SOLMS-BARUTH V:
Wax badan ayaa laga akhriyi karaa halkan: https://www.solms-baruth.com/about-pince-frederick-solms-baruth-v
Wax badan ayaa laga akhriyi karaa halkan: http://nigelwest.com/abouttheauthor.htm